Semalt विशेषज्ञहरु Google Search Console मा तपाईको Seo प्रदर्शन विश्लेषण गर्ने तरीका प्रस्तुत गर्छन्
तपाईं शीर्षमा पुग्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईं सक्नुहुन्न? ग्राहकहरूले तपाइँको साइट फेला पार्न सक्नुहुन्न? Semalt को नि: शुल्क वेब एनालिटिक्स उपकरण प्रयोग गरेर उत्तर जाँच, विश्लेषण र फेला पार्नुहोस्। हाम्रो कीवर्ड स्थिति जाँच उपकरणले गुगल खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठहरूमा साइट रैंकिंग प्रस्तुत गर्दछ र लक्षित पदोन्नतिको लागि कुञ्जी सुझाव दिन्छ।
व्यक्तिहरू के खोज्दैछन् भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् र तिनीहरूलाई चाहिएको कुरा बताउनुहोस्। तपाइँका प्रतिद्वन्द्वीहरु को श्रेणीहरु जाँच गर्नुहोस्, तिनीहरुको सफलताको रहस्य उजागर गर्नुहोस् र तपाइँको अनलाइन प्रमोशनको लागि यो नयाँ ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस्। सुधारिएको त्रुटिको विस्तृत रिपोर्टहरू र विश्लेषणको लागि सुधारिएको क्रम निर्धारण गर्नुहोस् जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ। वेब गुरु बन्नुहोस् र तपाईंको साइटको साथ भाग्य कमाउनुहोस्।
Semalt उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् कीवर्डको स्थिति जाँच गर्न र वेब विश्लेषकको प्रवृत्ति पछ्याउन:
तपाईको साइट को स्तर जाँच गर्नुहोस्
वेबमा यसको दृश्यता अनावरण गर्नुहोस्
प्रतिस्पर्धी साइटहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
प्रति पृष्ठ अनुकूलन त्रुटिहरू पहिचान गर्नुहोस्
विस्तृत वेब स्थिति रिपोर्टहरू प्राप्त गर्नुहोस्
हाम्रो वेब एनालिटिक्स बजार, तपाइँको स्थिति र तपाइँका प्रतिस्पर्धाहरुको साथै व्यापारिक एनालिटिक्सलाई अनुगमन गर्न नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्ने वेबमास्टरहरूको लागि व्यावसायिक विश्लेषण उपकरणहरू हुन्।
तपाईंलाई यसको किन आवश्यकता छ?
तपाइँको साइट को स्थिति को नियन्त्रण
गुगलमा उचित स्थिति प्राप्त गर्नु अनलाईन मार्केटिंगको लागि रणभूमि बनेको छ। यो जहाँ तपाइँको अनलाइन रणनीति को एक ठूलो हिस्सा निर्देशित गर्नु पर्छ। यसैले तपाईको प्रगति वा असफलता मोनिटर गर्न आवश्यक छ।
यो तपाइँलाई तपाइँको कम्पनी बजार मा कहाँ छ को एक पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो विश्लेषणात्मक डेटा तपाइँलाई तपाइँको भविष्यका कार्यहरूमा मुख्य बुँदाहरू हाइलाइट गर्न मद्दत गर्दछ: तपाइँको साइटलाई सही कुञ्जी शव्दहरूमा आधारित सामग्रीसँग भर्नुहोस्, सम्बन्धित कुञ्जीशब्दहरूको आधारमा लि buy्कहरू खरीद गर्नुहोस् / एक्सचेन्ज गर्नुहोस्, आदि।
तपाईंको प्रतिस्पर्धी को स्थिति नियन्त्रण गर्नुहोस्
तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको गहन छानबिन र विश्लेषण विस्तृत बजार विश्लेषणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन्। एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषणले तपाईंलाई आफ्नो बजारमा तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको क्षमता र कमजोरीहरू मूल्या assess्कन गर्न र तपाईंको प्रतिस्पर्धी लाभ सुधार गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन्छ।
Semalt ले तपाईंलाई चरण-चरण-चरण प्रतिस्पर्धी विश्लेषण प्रक्रिया मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ, तपाईंलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको पहिचान गर्न, तिनीहरूको गुण निर्धारण र तौल गर्न, तिनीहरूको सामर्थ्य र कमजोरीहरूको आकलन गर्न, र तपाईंको बजार क्षेत्रमा उनीहरूको लक्ष्य र रणनीतिहरूको अन्वेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
Semalt एनालिटिक्सले तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू बजारमा कहाँ उभिने सबै विवरणहरू प्रकट गर्दछ। यस जानकारीको प्रभावकारी प्रयोगले तपाईंलाई खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसन, पदोन्नति र विज्ञापन अभियानहरूमा उत्कृष्ट बनाउन अनुमति दिनेछ।
एक ठोस ग्राहक अधिग्रहण रणनीति हुनु र नयाँ बजारको खोजी कुनै पनि कम्पनीको लागि आवश्यक तत्व हो। यो बिना, तपाईं अर्थपूर्ण तरीकाले तपाईंको व्यवसाय बढाउन गाह्रो समय लाग्नुहुनेछ। त्यो भनियो, ब्यापार स्केलिंगको सब भन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष मध्ये एक नयाँ बजार आकर्षित गर्न को लागी सबैभन्दा दिगो च्यानल निर्धारण गर्नु हो।
तपाईंको व्यवसायको विश्लेषणबाट प्राप्त सूचनाले वस्तुहरू र सेवाहरूको वितरण र निर्दिष्ट देशहरूमा तपाईंको ब्रान्डको विकासको लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दछ, यसैले तपाईंको कम्पनीलाई क्षेत्रहरू, आदि सम्बन्धी सुविधाहरूमा विचार गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
डाटालाई रूपान्तरण पीडीएफ र एक्सेलमा
यस कार्यको महत्त्व ग्राहकहरु र प्रबन्धकहरु लाई प्रस्तुतीकरणमा हल्का मान्न सकिदैन। तपाईंसँग सेतो लेबल रिपोर्टहरू सिर्जना गर्न र तपाईंको ब्रान्ड अन्तर्गत तेस्रो पक्षहरूमा तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुपम अवसर छ।
Semalt एनालिटिक्स समावेश गर्दछ
सुझाव गरिएका कुञ्जी शब्दहरू
हामी तपाईंलाई सबै भन्दा उपयुक्त व्यावसायिक कीवर्ड चयन गर्न मद्दत गर्दछौं।
कुञ्जी शब्द खोजी उपकरणको लागि अब आवश्यक पर्दैन। तपाईंको प्रतिस्पर्धीको कुञ्जी शब्द लिनुहोस्, पीपीसी र एसईओ, गुगल डाटा र हाम्रो आफ्नै खोज प्रविधिमा गहन जानकारी लिनुहोस्। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको Semalt विशेषज्ञहरु लाई व्यवस्थापन छोड्नु पर्छ ।
समयको आधारमा तपाईंको कुञ्जी शब्दहरूको स्थिति दृश्य र विश्लेषण गर्नुहोस्। कुञ्जी शब्द स्थिति विश्लेषण ईन्टरनेटले खोज इञ्जिनमा प्रविष्ट गर्ने वास्तविक खोज सर्तहरूको अनुसन्धान र विश्लेषणको प्रक्रिया हो।
यी वास्तविक खोज सर्तहरूको बारेमा तपाईंले प्राप्त गर्नुहुने जानकारीले तपाईंको सामग्री रणनीति, साथै तपाईंको फराकिलो मार्केटि strategy रणनीति सूचित गर्न मद्दत गर्दछ।
किवर्ड अनुसन्धान किन महत्त्वपूर्ण छ?
अधिक र अधिक, हामी सुन्छौं कि एसईओ पछिल्ला १० बर्षमा कसरी विकसित भएको छ, र कसरी कुञ्जीशब्दहरू उनीहरू हाम्रो दिनहुँ गर्ने मानिसहरूले खोजी गर्ने क्रममा राम्रो दर्जा दिन हाम्रो क्षमता भएको छ।
खोज इञ्जिन प्रणालीमा तपाईंको साइटको स्थितिहरूको दैनिक अनुगमन।
तपाईंको प्रतिस्पर्धीको खोजी ईन्जिन स्थितिको अनुसन्धान र विश्लेषण।
तपाईंको ब्रान्डको नियन्त्रण
तपाईंको ब्रान्डको छवि सर्वोपरि छ, किनकि ects as% संभावनाहरु स्वतन्त्र रूपमा तपाईलाई खोज्नेछन्।
यो साधारण अवधारणाको लागि डरावना शब्द हो। तपाईंको ब्रान्ड तपाईंको कम्पनीको अनुहार हो। यससँग खेल्नुहोस्, र तपाईंलाई पहिचान गर्नमा समस्या हुन सक्छ। यसलाई स्थिर राख्नुहोस्, र तपाईं चाँडै नै एक सकारात्मक प्रतिष्ठा निर्माण गर्नुहुन्छ।
र तपाइँको कर्पोरेट पहिचान नियन्त्रण केवल तपाइँको ग्राहकहरु को लागी राम्रो छैन। ठीक भयो, ब्रान्ड नियन्त्रणले तपाईको धेरै समय बचाउन सक्छ, तनावको उल्लेख नगरौं।
यो विश्लेषणात्मक जानकारी तपाइँको लोकप्रियता दर देखाउँदछ, एक सक्षम सहयोग नीति विकसित गर्न को लागी तपाइँलाई।
तपाईंको साइटको साइट विकास र SEO उद्योग आवश्यकताहरूको अनुपालनको पूर्ण विश्लेषण।
अनलाइन एसईओ अडिट | SEO विश्लेषण
वेबसाइट खोज्न ईन्जिनले धेरै कारकहरू प्रयोग गर्दछ। वेबसाइट विश्लेषक एक एसईओ अडिट उपकरण हो कि यी कारकहरू र अधिकको जाँच गर्दछ। यसले तपाईंलाई समस्याहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको साइटको स्तरलाई बाधा पुर्‍याइरहेको हुन सक्छ। विस्तृत एसईओ साइट अडिट प्रदर्शन गरेर, हाम्रो उपकरणले तपाईंलाई तपाईंको साइटको एसईओ डाटाको पूर्ण अवलोकन दिन्छ, जस्तै मेटा ट्यागहरू, गुगल एसईआरपी सिंहावलोकन, साइटम्यापहरू, रोबोट्स.टेक्सट र अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण तथ्या .्कहरू।
वेबसाइट यातायात विश्लेषण | वेब ट्राफिक परीक्षक
वेबसाइट अडिट उपकरणको यस खण्डमा, तपाईं वेबसाइट ट्राफिकको एक विस्तृत विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको वेबसाइटको ग्लोबल रैंकिंग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यी सबै आवश्यक उपायहरू जस्तै तपाईंको वेबसाइटको बाउन्स रेटको साथ। तपाइँ यी डेटा मेट्रिक्स तपाइँको वेबसाइट रणनीतिहरु पछि योजना बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
हाम्रो साइटमा रेजिष्टर गरेपछि, तपाईं विश्लेषणात्मक डाटा स process्ग्रह प्रक्रिया सुरू गर्नुहुन्छ र तपाईंको वेबसाइटको स्थिति र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको स्थिति, साथै साइट निर्माण र एसईओ उद्योग मापदण्डको साथ तपाईंको साइटको अनुपालनमा विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग पहिले नै खाता भएको छ भने, तपाईं जहिले पनि एक नयाँ प्रोजेक्ट (वेबसाइट) तपाईंको व्यक्तिगत स्थानमा थप्न सक्नुहुनेछ, र यसलाई प्रणाली द्वारा विश्लेषण पनि गरिनेछ।
तपाईंको साइटको विश्लेषणको बखत, हाम्रो प्रणालीले कीवर्डहरू प्रस्ताव गर्दछ जसले तपाईंको वेबसाइटको विश्लेषणबाट प्राप्त गरेको सामग्री र मेटा नाम = '' कीवर्ड '' डाटामा आधारित बिक्री र भ्रमण उत्पन्न गर्दछ। तपाइँ तपाइँको आफ्नै कुञ्जी शव्द थप्न सक्नुहुन्छ वा कुनै पनि समयमा अवस्थित कुञ्जी शव्द हटाउन सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक राष्ट्रिय डोमेन क्षेत्र तपाईंको छनौटको भाषामा अनलाइन खोजीलाई अनुमति दिदै 8 338 गुगल खोजी ईन्जिनहरू द्वारा समर्थित छ। यी सबै ईन्जिनहरूले Semalt मा तपाईंको साइटको स्तर निर्धारण गर्दछ।
त्यसैले Semalt तपाईंको साइट को विश्लेषण को लागी धेरै खोज इञ्जिनहरु को उपयोग सल्लाह दिन्छ। वेबसाइट ईनलिसिसको लागि तपाईले चाहानु भए जस्तो धेरै खोजी इन्जिनहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक दिन, हामी साइटको स्थिति विश्लेषण गर्दछौं र उनीहरूको प्रगति पछ्याउँदछौं। थप रूपमा, हामी तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा जानकारी भेला गर्दछौं (यदि तपाईं तिनीहरूको साइटहरू मोनिटर गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने)।
अन्य साइटहरूको विपरीत, हामी नियमित रूपमा तपाईंको अवस्थितिहरू अपडेट गर्दछौं, जुन तपाईंलाई दिनको कुनै पनि समयमा तपाईंको साइटको स्थिति अनलाइन ट्र्याक गर्न र नयाँ परिवर्तनहरू हेर्न अनौंठो अवसर दिन्छ।
तपाईं असंख्य फिल्टरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको कामसँग डाटाको साथ सजिलो बनाउँदछ र तपाईंको परियोजनाहरूको सफलताको लागि निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।
तपाइँ तपाइँको कुञ्जी शब्दहरुलाई समूहको ब्यबहार गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको ब्यापारको विशिष्ट खण्ड मोनिटर गर्न र उपयोगी नोटहरु लिन सक्नुहुन्छ जुन इन्फोग्राफिक उपकरणमा प्रदर्शित हुन्छ र निश्चित मितिमा जोडिनेछ।
तपाईं एपीआई प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हाल जानकारी स्थानान्तरण गर्ने धेरै विधिहरू छन्। तेस्रो-पार्टी संसाधनमा मोड्युल तिनीहरू मध्ये सबै भन्दा राम्रो हो। पछिल्लो धेरै सुविधाजनक छ किनकि डाटा स्वचालित रूपमा सि sy्क्रोनाइज हुन्छ, प्रयोगकर्ताहरूलाई अद्यावधिक जानकारी हेर्नको लागि अनुमति दिँदै। तपाईको पक्षबाट कुनै प्रयासको आवश्यक पर्दैन। तपाइँ जहिले पनि कुनै पनि छनौट गरिएको स्रोतबाट अप-टु-डेट विश्लेषणात्मक डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ।
सबै विश्लेषणहरू तपाईलाई विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिन्छ जुन PDF वा CSV (व्हाइट लेबल र Semalt लेबल) ढाँचामा रूपान्तरण गरियो जुन तपाईं हाम्रो वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
रिपोर्ट चयन गरिएको फ्रिक्वेन्सीको आधारमा सूचित ई-मेल ठेगानामा पठाउन पनि सकिन्छ। यसले तपाईंको आफ्नै धारणामा राम्रोसँग रूपान्तरण गर्न सक्दछ साथै तपाईंको प्रगतिको गतिशीलता तेस्रो पक्षमा प्रस्तुत गर्दछ।
तपाईंको व्यक्तिगत व्यवस्थापक तपाईंको प्रगति अनुगमनको लागि जिम्मेवार छ र कुनै पनि समयमा परामर्श वा प्रश्नहरूको लागि उपलब्ध छ। तपाईं आफ्नो सुविधा मा हाम्रो टीम सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
एनबी: यदि तपाईंले एसईओ पदोन्नति रोक्नुभयो भने, सबै ब्याकलिंक्सहरू हटाइनेछ, र गुगलले तिनीहरूलाई केही महिनामा यसको डाटाबेसबाट निकालिनेछ। तपाईले एसईओ अभियानको क्रममा हासिल गरेको र्या the्कि gradually बिस्तारै घटेको खण्डमा पनि ती पनी पहिलेको भन्दा अझ माथि नै हुनेछ।
यदि तपाईंसँग कुनै वेबसाइटको स्वामित्व वा संचालन छ भने, तपाईं सर्च ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) सर्तको बारेमा धेरै सचेत हुनुपर्दछ र SEO उपकरणहरू मध्ये एक सुन्नुभयो / प्रयोग गर्नुभयो। SEO ले Google रोबोट समावेश गर्दछ जुन तपाईंको साइटमा आउँदछ र यसलाई अनुक्रमणिका लागि क्रल गर्दछ। र यसको एल्गोरिदममा आधारित, यदि गुगलले तपाईंको डाटा सही र पर्याप्त अनुकूलित फेला पार्छ, तपाईंको वेबसाइट चाँडै गुगलमा उच्च श्रेणीकरण गर्दछ। गुगल वेबसाइट एनालिटिक्सले कसरी काम गर्छ यहाँ छ।
क्रॉलरहरूले तपाईंको वेबसाइटको सामग्री जाँच्दछन् र तिनीहरूको डाटाबेसमा डाटा रेकर्ड गर्छन् र यसको विश्लेषण पछि तपाईंको वेबसाइटलाई दर्जा दिन्छ।
तपाइँ कति वेब ट्राफिक पाउनुहुनेछ र साइट वा पृष्ठ गति के हो भनेर निर्धारण गर्न तिनीहरूले SEO प्रयोग गर्छन्। यो किन तपाईंको एसईओ निगरानी गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र यो हाम्रो वेबसाइट विश्लेषण उपकरणले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।